Antsohihy-Bealanana : miroso ny asa fanamboaran-dalana (NewsMada) | AEMW
Antsohihy-Bealanana : miroso ny asa fanamboaran-dalana (NewsMada)
Miroso ny asa fanamboaran-dalana Antsohihy-Bealanana, 129 km, any amin’ny faritra Sofia. Manomboka mahita tombontsoa ny mponina any Bealanana ankehitriny amin’ny famoaham-bokatra isan-karazany, indrindra ny vary. Azo lazaina fa sompitra iray any amin’iny faritra Avaratra Andrefana iny, ny distrikan’i Bealanana eo amin’ny famokaram-bary. Hatramin’izay, mikatso io lalana io, indrindra rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra, mijaly ny mponina, tsy amin’ny famoaham-bokatra ihany fa amin’ny lafiny hafa maro, toy ny fanaovana ny raharaham-panjakana, fitsaboana, sns. Kely sisa amin’izao fotoana izao ny fotoana hamitàna tanteraka izany asa izany, nankinina amin’ny orinasa sinoa iray.
Misy ihany koa ny fifanarahana amin’io orinasa io momba ny fanamboaran-dalana ao an-tanàna, miampy ny fanamboarana sy fanadiovana ireo lakandrano. Mijaly ny mponina rehefa main-tany noho ny vovoka ary fotaka mandritra ny fotoam-pahavaratra. Manaja ny fitsipika ho fitandroana ny fahadiovan’ny tanàna ny mponina amin’izao fotoana izao, araka ny vaovao avy any an-toerana.
Betsaka ireo distrika any amin’ny faritra maro miandry fanamboaran-dalana mankany aminy. Andrasana ny hisian’ny asa, toy ny mampifandray ireo distrika roa ireo. Mpiahy ny faritra Sofia rahateo ny minisitry ny Asa vaventy, Razafimandimby Eric, nefa tsy tokony ho any ihany ny hisian’ny tetikasa fanamboaran-dalana.
← Mpampiasa : hamoraina ny fandoavana adidy (NewsMada)
Analamanga : nampitaovana ny kaominina 31 ny faritra (NewsMada) →